ဒီနှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ရက်မှာ မောင်လူအေး အမိ မြန်မာပြည်မှာ ရှိပါမယ်။ သို့ကလို အမိ မြန်မာပြည်ကို ပြန်တဲ့ခါ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ System Unit ကို မြို့တော် ရန်ကုန်က ညီတော်မောင်များ အတွက် ယူသွားမှာ ဖြစ်လေတော့ မသွားခင်လေး စက်ကို ရှင်းလင်းရေး လုပ်ရင်းနဲ့ ထွက်လာတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အများစုတော့ နားထောင်ဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ တရုတ်နှစ်ကူးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်တာမို့ နားထောင်ဖူးပြီးသူများ ထပ်မံ နားဆင်ဖို့နဲ့ နားမထောင်ရ သေးသူများလည်း နားဆင်ကြည့်စေနိုင်ဖို့ပါဗျာ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်ကထင်တယ် နားထောင်ဘူးတယ်ဗျ။ ကောင်းတယ်။ အိမ်အပြန်အဆင်ပြေပါစေဗျား။
>> Anonymous နဲ့ Mr DBA
လာရောက်လည်ပတ် မှတ်ချက်ပြုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ...
Here is my website :: jalster.com
Also visit my webpage: www.uactu.com
My web site bloggicle.com
Here is my web blog; http://www.fromzine.com/?q=en/content/how-finance-spanish-property-1
I'm not certain what I would've carried out without the strategies
my subject. Completely was the alarming
circumstance in my opinion, however , being able to
viewaprofessional style you handled that
happiness. I am thankful for this advice and as well ,
you are aware of an amazing job you have been putting in instructing most people all throughaweb site.
Feel free to surf to my blog post ... http://Agryd.com/index.php?do=/blog/229019/guide-to-the-top-ten-vacation-sites-in-spain/add-comment
Also visit my web page; olo.ru
Visit my homepage :: gamersadda.org
What’s Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively helpful and it
Also visit my website ... http://www.scenerise.com/blog/view/80523/how-to-get-to-denia-spain-by-train-from-alicante-benidorm-altea-or-calpe-cheap-and-easy
Here is my web-site - http://www.joboloco.com/
Here is my weblog :: indimusic.tv
Also visit my web site ... http://Creativus.lv
My webpage ... Vagored.Com.nu